नेत्रहीन क्रिकेटरलाई राज्यले कष्ट दियो तर मानेनन् हार – Vision Khabar
। २४ पुष २०७४, सोमबार २०:२८ मा प्रकाशित
डा. सन्जय धरेल ।
पाकिस्तानकी आइरन लेडी भनेर प्रख्यात मुनिबा मझारीले एक कार्यक्रममा आफ्नो जीवनगाथा सुनाउँदै भनेकी थिइन्, ’धेरैले मलाई अशक्त महिला भने। तर मैले उनीहरुलाई जवाफ फर्काएर भनेँ, म फरकपनबाट काबिल छु। तिमीहरु जे कुरालाई अभिशाप ठान्छौ, म त्यसमा अवसर देख्दछु। तिमीहरु जे कुरालाई कमजोरी भन्छौ, त्यसलाई म आफ्नो शक्ति ठान्दछु। तिमीहरु जे कुरालाई बेकाम ठान्छौ, यसमा म आफ्नो क्षमता देख्दछु।’
ह्वीलचेयर गुडाएर स्टेजमा उनले यस्तो भाषण गरेकी थिइन्। यो सुनेर धेरैको आङ सिरिंग भयो। हो, उनैको भनाइलाई सापेक्ष रुपमा हेर्दा नेपाली राष्ट्रिय नेत्रहीन क्रिकेट टिममाथि वैचारिक न्याय हुन्छ। हाल नेत्रहीन एकदिवसीय विश्वकप खेल्न पाकिस्तान पुगेका खेलाडीहरुले उद्घाटन समयमा उठाएको राष्ट्रिय झन्डाले कुन चाहिँ नेपालीको शिर निहुर्यायो र? तर स्वभिमानको प्रतिविम्बित गर्ने टिमले पाकिस्तान पुग्न ४ दिन कष्टकर यात्रा गर्नुपर्‍यो ।
फरक क्षमतावान नेपाली क्रिकेट टिमको साहसलाई विश्वले सलाम गर्नुपर्ने हुन्छ। राज्य निकायबाट उचित व्यवस्था नहुँदा पनि उनीहरुले हार मानेनन्। कष्टकर यात्राको उदाहरण त छँदै छ, उद्घाटन समारोहमा नेपाली कप्तानको ट्राउजर र ज्याकेटमा थियो। तर बंगलादेश र पाकिस्तानका खेलाडी टाइसुटमा उपस्थित थिए। सारा संसारले हेर्ने समारोहमा राज्य निकायबाट हुनुपर्ने व्यवस्थापनका हिसाबले हाम्रो उपस्थिति कमजोर देखियो जसले सबैलाई दुस्खित तुल्यायो। कपडामा स्वाभिमान हुँदैन भन्ने एकथरी विचार पनि होला। तर म भन्छु– मेरो देशको प्रधानमन्त्रीज्यु नगारिकलाई चिसोको बेला न्यानो र तातोको बेला चिसोको व्यवस्था राज्यले नै गर्नुपर्छ।
दृष्टिविहिन क्रिकेट टिमले अन्धकारकाबीच उज्यालो पुकार गरिरहेका छन्, पाकिस्तानी भूमिमा नेपाली झन्डा फहराएर विश्वकपमा सहभागिता जनाउँदै छन्। जनताले ’स्वाभिमानको ल्ऋक्क् अभियान’ ग्रहण गर्दै देशविदेशबाट सहयोगको वर्षा गरिरहेका छन्। स्वाभिमानको सवालमा जनता सधैं जनादर्न भए, यो फेरि पुष्टि हुँदैछ।
’सुनिदेऊ मेरा अन्धकारबीचका उज्याला पुकारहरु।’ यही भन्दैछन् दृष्टिविहीन क्रिकेट टिम, जसलाई अब सरकारले पनि सुन्नुपर्छ।